အိန္ဒိယ: အဆိုပါဆွန်နီ Waqf ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Nirvani Akhara Ayodhya ဖို့စေ့စပ်ဖြန်ဖြေကိုရှာခြင်း | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: အဆိုပါဆွန်နီ Waqf ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Nirvani Akhara Ayodhya ဖို့စေ့စပ်ဖြန်ဖြေကိုရှာခြင်း | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အဆိုပါဆွန်နီ Waqf ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Nirvani Akhara Ayodhya ဖို့စေ့စပ်ဖြန်ဖြေကိုရှာခြင်း | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အဓိကမွတ်စလင်ပါတီများနှစ်ယောက်နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ မှာ Ram Janmabhoomi-Babri ဗလီအပြည်ပြည် 2.77 ဧက၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြန်လည်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေးကျောမတီ၏တရားရုံးချုပ်မှရေးသားခဲ့သည် Ayodhya .
ဆွန်နီ Waqf 1961 အတွက်အငြင်းပွားဖွဲ့စည်းပုံ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတရားစွဲဆိုခဲ့သောကော်မရှင်သည်, SC ကခန့်အပ်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးကျောမတီဟောင်း IMF က Kalifulla တရားသူကြီးကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကာအာမခံ၏ရေးစပ်ပြီးကုလားထိုင်မှရေးသားခဲ့သည် ကျော်ကြားတဲ့ရှေ့နေ Sriram Panchu နှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်သီရိသီရိ Ravishankar, စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြန်လည်စတင်တောင်းခံမှုကြောင့်တစ်ဦးတည်ဆောက်ပေးထားသည့် Jamiat Ulema-e-မင်ဒ၏ Maulana Arshad Madani အဖွဲ့ခွဲများကခေါ်ဆောင်သွားကုမ္ပဏီလိုင်းကိုဖို့ 29 ဇူလိုင်လပိတ်ဆို့ အငြင်းပွားနေရာတွင်သိုးထီးဗိမာနျ။
အလားတူသဘောထားဖော်ပြတစ်ဦးကစာတစ်စောင်ဗိမာနျတျော Hanuman Garhi စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ပေးသော Nirvani Akhara, Ayodhya အတွက်သုံး Ramanandi Akharas တကရေးသားခဲ့သည်။ ဆွန်နီ Waqf ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Nirvani Akhara အဆိုပါပါတီများကိုအဝေးမှသောအခါရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုပြိုင်ဘက်များ၏ခက်ခဲလိုင်းများ၏ပွင့်လင်း left တစ်အခြေချအတွက်နောက်ဆုံးကီလိုမီတာ၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဆောင်သွားရန်လုံခြုံရေးကောင်စီကြားဝင်ဖြန်ဖြေအုပ်စုတွင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ မတ်လ 155 8 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းဖျန်ဖြေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သူအများအပြားသက်ဆိုင်သူများ။
နောက်ထပ် Ramanandi Akhara - Nirmohi Akhara - ထို့အပြင်အငြင်းပွားမှုသည့်အခါတရားသူကြီးများ၏ထိုင်ခုံစွမ်းရည်အတွက်တရားသူကြီးတစ်ဦး၏တစ်ဦးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဘို့ခဲယဉ်းတောင်းပန်ခဲ့ Ranjan Gogoi နှင့်တရားသူကြီးများကိုလုပ် SA Bobde, Dy Chandrachud, Ashok Bhushan နှင့်အက်စ်ဒူလ် Nazeer ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်အကြံပြုချက် Bobde တရားသူကြီးထောက်ခံသုံးယောက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကော်မတီကတက်ထားပြီ။ အငြင်းပွား site ၏ရုပ်တုယဇ်ပုရောဟိတ်အခွင့်အရေးများရှာကြံ Nirmohi Akhara ။
အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုအဆုံးနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့သောအခါ, အဖွဲ့ခွဲ Arshad Madani JUH နှင့် Nyas ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူနှစ်ဖက်စလုံးကနေသက်ဆိုင်သူများနီးပါးတစ်ဦးသဘောတူညီမှုရောက်ရှိနေပြီနှင့်သူ၏အဓိကမှတ်စည်းမျဉ်းဥပဒေ၏ဖွဲ့စည်းမှုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် ခဲ့ကြသည်: တစ်) မွတ်စ်လင်ဟိန္ဒူတစ်ဦးရမ်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှါရှာကြံသောအငြင်းပွား site ပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ပြောဆိုချက်ကိုအရှုံးမပေး; ခ) မွတ်စ်လင်ဗလီ၏ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ site ကိုနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် နှင့်ဂ) ဝတ်ပြုမှုသောနေရာများပေါ်တွင် 1991 ပညတ်တရား၏အကောင်အထည်ဖော်မှု (အထူးပြဋ္ဌာန်းချက်) ဝတ်ပြုမှုမဆိုရာအရပျ၏ပြောင်းလဲခြင်းတားမြစ်ထားကြောင်း 15 အပေါ်တည်ရှိအဖြစ်ဝတ်ပြုရာမဆိုရာအရပျ၏ဘာသာရေးဇာတ်ကောင်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့အက်ဥပဒေ, သြဂုတ်လ 1947 ။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြန်လည်စတင်မေတ္တာရပ်ခံကြောင်းပါတီသတင်းရပ်ကွက်များကစည်းမျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့အကြောင်းကိုခဲ့ပြီးသောစေ့စပ်ဖြန်ဖြေလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြု CJI Gogoi ဦးဆောင်သော SC ၏ထိုင်ခုံအဘို့အခက်ခဲဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် ကတရားခွင်တရားရုံးအပြိုင်ဆက်လက်လို့။ အထွတ်တရားရုံး။ Arshad Madani အဖွဲ့ခွဲများနှင့် Nyas - - ဒါပေမယ့်သတင်းရင်းမြစ်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးကျောမတီကမွေးစားတဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏ခကျြအောကျကသဘောတူသောသူအပေါင်းတို့ပါတီများ, ခက်နှစ်ဖက်စလုံးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဦး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်ရောက်ရှိအခြေချရှေ့ဆက်သွားရလိမ့်မယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်မွတ်စလင်များအကြားညီအစ်ကိုများ၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်စုစည်းပြီးအတွက်ရှည်လျားသောလမ်း။
အိန္ဒိယ: ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Sena နေရူး, ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ၏ကာကွယ်ရေးများအတွက်ကွန်ဂရက်ကြိုဆို | အိန္ဒိယသတင်း
သမ္မတမျောပါခြင်းမှာ Kais Saied နှင့် Nabil Karoui, တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏အတိအကျကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ် 2e